RuhrGold - RuhrGold စင်ကြယ်သောသဘာဝ lager, radler, Weizen နှင့် bock ဖြစ်ပါသည်
သွင်းကုန် - ပို့ကုန်
မိုးလုံလေလုံ Advertising ကြော်ငြာ
အတှေ့အကွုံသင်တန်းတိုင်းအခိုက်အဘို့အပြည့်အဝနဲ့ထူးခြားတဲ့အရသာ RuhrGold ။
RuhrGold အဖြစ်ရရှိနိုင် lager ဘီယာ, Radler, Weizen en Bock.
တစ်ဦးကလတ်ဆတ်တဲ့ရွှေဆံပင်ရွှေရောင် Weizen နှင့်အထူးသဖြင့်အပြည့်အဝဦးခေါင်းနှင့်အတူ။
တစ်ဦးကအစွမ်းထက်နှင့်ရိုးသား lager ။ တစ်ဦးကတစ်ဦးကိုက်နှင့်အတူ lager, အရသာ-hop အရသာနှင့်စင်ကြယ်သောသဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများထံမှပြသနာတွေ။
တစ်ဦးကအငတ်-အအေးခံစင်သံပုရာဖျော်ရည်၏အရသာအရသာနှင့်အတူ Radler လန်းဆန်း။
ခံစားကြည့်ပါ? ၏သင်တန်း RuhrGold!
အထူးကု FOR RUHRGOLD
ဤတွင် RuhrGold ရရှိနိုင်ပါသည်:
ရှာဖွေရေးအချင်းဝက် 10 ကီလိုမီတာ25 ကီလိုမီတာ50 ကီလိုမီတာ100 ကီလိုမီတာ200 ကီလိုမီတာ500 ကီလိုမီတာ
ပထမဦးဆုံးအ Iveco ကိုအပ်
ပထမဦးဆုံးအ IVECO ယခင်က Rijsenhout အတွက် RuhrGld BV မှာဒီလကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ ဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုကြောင့်လာမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်းအတော်ကြာကားစင်းကိုမှဆက်ပြောသည်ပါလိမ့်မယ် ....
Horecava 2019 အပေါ် RuhrGold သွားရောက်ကြည့်ရှု
Horecava: နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်အကြီးဆုံးကုန်သွယ်တရားမျှတမှာဒီနှစ်ကိုလည်း Horecava 2019 RuhrGold ပစ္စုပ္ပန်အပေါ် RuhrGold သွားရောက်ကြည့်ရှု! ဤသည်4ရက်ပေါင်းနှင့် foodservice စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အရာရာသည်။ မတ်တပ်ရပ် (နံပါတ် 10 ရပ်) နှင့်မှုတ်သွင်းခံရဖို့ခန်းမ 250 10.250 အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု။ ကိုရှု ......
RuhrGold cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ cookies တွေကိုအားမရခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူတစ်ဦးအဖြစ်သင်တို့ဆီသို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါနှင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပိုကောင်းသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ information ကိုထင်ဟပ်နိုင်ပုံကိုလေ့လာသင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုပေး။ ၌အကြှနျုပျတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာမူဝါဒ တင်. ကျွန်တော်တို့ဟာဒေတာစုဆောင်းငါတို့သည်အဘယ်သို့အသုံးပြုရန်ဘယ်လောက်ကျနော်တို့စုဆောင်းသောအရာကိုဒေတာထုတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ Accept
ဖုန်းကို: ဖက်စ်: E-mail ကို: